Kooxda Leicester oo la gudoonsiiyey koobka horyaala Ingriiska
Kooxda Leicester oo la gudoonsiiyey koobka horyaalka Ingriiska
Kooxda Leicester ayaa la gudoonsiiyey horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingriiska kadib markii Everton kaga badiyeen aqalkooda.
Leicester ayaa cayaar ka tirsan is-araga horyaalka Ingriiska kaga kor talaabsadey 3:1 kooxda Everton.
Labo goolashaan kamid ah waxaa kooxda Leicester u dhaliyey cayaaryahanka weerarka uga cayaara Vardy halka goolka kale uu dhaliyey King.
Kooxda Everton ayaa daqiiqadii 88aad waxaa gool kaliya u dhaliyey Mirallas.
Koobka horyaalka Ingriiska ayaa waxaa gudoomey maalqabeenka iska leh kooxda Leicester ee u dhashey dalka Thailand Vichai Srivaddhanaprabha iyo tababaraha Claudio Ranieri.
Horyaalka Ingriiska ayaa cayaarihiisa ugu dambeeya waxaa ay dhacayaan May 15, 2016 iyadoo loo kala tartamayo kaalimaha labaad, sadexaad, Afraad iyo kuwa kale halka dagaal adag ka dhexeeyo kooxda Aston Villa iyo Newcastle kuwasoo ka baqaya iney ka haraan tartanka bilaami doona 2016/2017.
Kooxda Sunderland oo ku durdurisay Everton
Cayaaraha 12.05.2016. 00:42
Kooxda Sunderland ayaa ka baxsatey iney ka harto ka qayb galka horyaalka kubadda cagta dalka Ingriiska sanadka soo socda iyadoo hoos u riixdey kooxaha Norwich iyo Newcastle kadib markii ay ka adkaatey habeenimadii Arbacada 11 May, 2016 Everton.
Sunderland oo maamulkeeda tabab ...
Leicester City oo ku guulaysatay horyaalka Ingiriiska
Cayaaraha 03.05.2016. 08:18